Cabdiweli Gaas oo shaaciyay inuu soo bandhigayo sir badan oo uu arkay Mudadii uu ahaa madaxwaynaha Puntland. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Cabdiweli Gaas oo shaaciyay inuu soo bandhigayo sir badan oo uu arkay Mudadii uu ahaa madaxwaynaha Puntland.
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa shaaciyay inuu soo wado buug cusub oo uu kaga warami doono dhacdooyinkii uu la kulmay waqtigii uu ahaa madaxweynaha Puntland
Dr. Cabdiweli Gaas ayaa tilmaamay buuggaan inuu si gaar ah ugu muujin doono dhacdooyin uu tilmaamay in ay ka qorsoonaayeen indhaha dadka reer Puntland, laakiin wuxuu iska fogeeyay inuu ka hadli doono beelo, shakhsiyaad ama gobol.
Mar la weydiiyay sababaha uu u qoray buuggiisa ugu dambeeyay, ayuu kaga jawaabay, “Dadka kugu waqtiga ah ama aad madaxda u tahay wax badan uma sheegi jirtay, gaar ahaan waxyaabaha ka dhacaya miiska gadaashiisa.
Gaas, ayaa ugu baaqay dadkii horey u dhibsaday waxyaabaha ku jira buugga uu dhawaan soo bandhigay, inay ka hadlaan, haddii uu khalad jirana, wuxuu sheegay inuu sixi doono.
Buugga madaxweyne Gaas uu ka qoray caqabadihii kala guurka Soomaaliya iyo safar uu ku tagay Puntland sanadkii 2012, ayaa waxaa kasoo muuqday sheekooyin xasaasi ah oo dhex maray isaga iyo siyaasiyiin badan oo qaarkood madaxweynayaal noqday.
Previous articleDAAWO:- Xildhibaano uhanjabay MD Deni “Safarkii Kismaayo waa qalad + Xil ka qaadista Deni oo la diyaarinayo”.
Next articleDagaal aan la filayn oo xalay ka qarxay Duleedka Magaaladda Kismaayo Xilli Jubbaland ay wajahayso…